Masaka ny voaloboka, sary nopihana raha mbola tsy notazana ilay voankazo
février 15, 2013 at 2:37 Laisser un commentaire
Raha mbola variana amin’ny fanekena na tsia an’i Andry Rajoelina ho filohan’ny tetezamita ny mpanohana an-dRavalomanana Marc dia heveriko kosa fa tokony hiompana amin’ny fifidianana amin’izay ny tolona atrehina amin’izao fotoana izao.
Misy sahady manko ny mieritreritra fa hirarakompana ny fanampian’i Lafrantsa an’ilay zalahy io ka mety hahagaga ny olona izany, ary mety haharesy lahatra azy hifidy azy indray. Tsy hipetrapetraka fotsiny amin’izao akory i Lafrantsa raha mahatafapetraka ny olony fa tsy maintsy hikendry ny
hitoetra maharitra eto. Noho izany, tsy maintsy ataony bobaka ny fanampiana ara-tsakafo ary mety hahavita managana drafitr’asa maro dia maro tampoka aza izy (hahavita lalana).
Hafatra mipetraka ho an’ny mpanara-maso sahady manko ny fitsenana ny praiminisitra nataon’ireo masoivoho sasantsasany tarihin’ny masoivoho Amarikana. Nisaina tokoa noho izany i Monja Roindefo raha nitady ny hanafainganana ny fifidianana ho filoham-pirenena. Araka ny mahaela ny tetezamita manko no mety hahamaro ny fanampian’i Lafrantsa, izany hoe hahavitan’i Andry Rajoelina zavatra ho fanampena-maso ny vahoaka dia ho roboka amin’ny rom-boanemba (ron-tsaramaso) ny sarambambe hoe mahavita zavatra hay ilay ranamana ity… Ny tetik’i Lafrantsa (sy i Etazonia) ao ambadika anefa dia hoe rehefa lany ny olon-tsika dia tsihifintsika tsy misy ahiahy amin’izay ny harenan’i Madagasikara.
Dia apetraho sahady ary ny toriteny hoe hivarotra ny fizokiana toy izay nataon’i Esao tamin’ny voanemba ve ianao sa mitady ilay fizokiana antsoina hoe fahaleovantena ara-toe-karena? Rehefa hotrandrahana tokoa ve ny solika dia ho lasa tany miady amin’izay i Madagasikara?
octobre 10, 2009 at 11:36 Laisser un commentaire